Ma Weyn Doontaa Shaqo Suuqgeyntaada Robot? | Martech Zone
Kani waa mid ka mid ah qoraalada aad ku snicker at ka dibna aad u hesho tallaal bourbon ah si aad u ilowdo. Jaleecada hore, tani waxay umuuqataa su’aal lagu qoslo. Sidee adduunka ugu beddeli kartaa maamulaha suuqgeynta? Taasi waxay u baahan tahay awoodda si wanaagsan loo barto dabeecadaha macaamiisha, si qoto dheer loo falanqeeyo xogta iyo isbeddellada adag, oo si hal abuur leh looga fikiro in lala yimaado xalal shaqeeya.
Su'aashu waxay nooga baahan tahay inaan ka wada hadalno shaqooyinka aan dhab ahaan u qabanno ka ganacsade ahaan maalin kasta iyo wixii ay suuqyadu ku qaban lahaayeen maalin kasta. Inta badan suuqleydu waxay u wareejinayaan xogta nidaamka illaa nidaamka, horumarinta iyo falanqaynta warbixinnada si ay u keenaan caddeyn muujineysa in tijaabooyinkooda ay ansax ahaayeen, aan ansax ahayn, ama la wanaajin karay, ka dibna u adeegsanaya hal-abuurkooda si ay u wadaan natiijooyinka ganacsiga.
Ku wadida natiijooyinka ganacsiga hal-abuurnimadu waxay umuuqataa inay aasaas u tahay suuqle kasta, in kasta oo suuqleyda badankood aysan helin waqti ku filan oo ay sidaas ku sameeyaan. Nidaamyadu waa duugoobeen, nidaamyadu ma wada xiriiraan, suuqyadu way kala wareegaan, waxaanna u baahannahay hanaan deg deg ah xitaa si aan u sii wadno. Natiijo ahaan, dadaalkeena badankiisa waxaa lagu bixiyaa meel ka baxsan qiimaheena dhabta ah - hal-abuurka. Hal-abuurnimaduna waxay noqon kartaa caqabadda ugu adag ee lagu beddeli karo robot. Taasi waxay tiri tasks howlaha aan waqtigeena ugu badan ku bixino waa la beddeli karaa si ka dhakhso badan sidaad moodeysid.
Horumarka tikniyoolajiyaddu waa mid xiiso u leh suuqleyda maxaa yeelay waxay ka takhalusi doonaan shaqooyinka aan caadiga ahayn, kuwa soo noqnoqda, iyo falanqaynta waxayna noo suurtagelinayaan inaan xoogga saarno dadaalkeenna badan halka ay hibadayadu runti tahay - hal-abuurka.
Barashada Mashiinka - leh dhibco badan oo isku dhafan oo ah xogta quudinta xogta suuqa, xogta tartanka, iyo xogta macaamiisha, balanqaadka barashada mashiinka ayaa ah in nidaamyadu soo jeedin karaan, fulin karaan, iyo xitaa in la wanaajiyo imtixaanada kaladuwan. Ka fikir inta jeer ee aad soo ceshan doontid marka aadan u baahnayn inaad duugto oo aad weydiiso xogta in ka badan.
Sirdoonka Artificial - halka keli ahaan ay u noqon karto dhawr iyo toban sano, caqliga macmalka ah waa horumar xiise leh oo xagga suuq-geynta ah. AI wali waxay ubaahantahay xog aan xadidneyn si ay u gaarto heerarka hal abuurka ee bina aadamka maanta, sidaa darteed shaki ayaa ku jira in maamulaha la badalayo waqti dhow
Taasi micnaheedu maahan in AI waligood soo saari doonin hal-abuurka, in kastoo. Bal ka fikir nidaam falanqeeya gujinaya xogta ku saabsan xayeysiiska - ka dibna falanqeynaya xayeysiiska tartanka. Waxaa laga yaabaa AI inuu kari karo bartaan sida loo abuuro kala duwanaansho macquul ah oo ku saabsan cinwaannadaada iyo muuqaalada si loo wanaajiyo guji-dhex-galka iyo beddelaadyada. Sanado kama maqna taas - nidaamyadan ayaa halkan yaal.
Hal-abuurka aadamiga si fudud ayaa loogu daydaa, laakiin way adkaan doontaa in la soo celiyo. Kalsooni badan kuma qabo inaan arki doono robot u ololeynaya sidii olole hal abuur leh sida Leisurejobs ku sameysay muuqaalkan waqti dhow. Laakiin waxaan hubaa sanado yar gudahood inay awood u yeelan doonto inay wax ka barato oo ay nuqul ka sameysato!
47% shaqaalaha aadanaha waxaa lagu beddeli doonaa aalado marka la gaaro sanadka 2035, maxay macquul u tahay in lagu beddelo?
Shaqadaadu Ma Waayaysaa?
Tags: 2035aisirdoonka macmallieurejobsbarashada mashiinkakaca ee aaladosuuq geynta robotkabeddelka aaladda